‘Colisée’ ao Anatirova, OMS sy ny CVO, fitombon’ny tranga tratry ny ‘covid-19’ - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mamarana ny 15 andro fahadimy amin’ny hamehana ara-pahasalamana isika amin’izao herinandro hatramin’ny Pantekoty izao. Anisan’ny zavatra nanamarika ny herinandro lasa iny ny ‘colisée’ notahafina tamin’ny any Roma naorin’ny fitondram-panjakana haingana dia haingana eny Anatirova Antananarivo izay nahagaga ny olona maro, nipoiran’ny hevitra mifanipaka tamin’ny haino aman-jery samihafa sy tambajotra sosialy, tsy nampitovy hevitra teo amin’ireo sokajin’olona maro mpahay tantara sy mpandala ny vakoka. Anisan’ny naneho hevitra momba izany tamin’ny fahitalavitra tsy miankina ny Jeneraly Ramakavelo Désiré, mpahay tantara sy akademisianina, nilaza fa samy hafa ny ‘restauration’ famerenana amin’ny laoniny ny vakoka sy ny ‘renovation’ izay fananganana zava-baovao. Anisan’ny mitsipaka ny fikitihana ny ao anatin’ny rova ihany koa ary handalana ny hasina sy hitandremana ny fady amin’ny rova ny Profesora Ralison Roger, araka ny resany tamina radio tsy miankina, izy izay efa tompon’andraikitra momba io rova io tany amin’ny taona 1974. Misy ihany koa ny fanangonan-tsonia any amin’ny tambajotra sosialy hanoherana io fandravana ny soatoavin’ny vakoka malagasy io, ka maherin’ny 10 000 no efa voangona raha 15 000 no tanjona tamin’ny 25 mey 2020. Tsiahivin’ny mpisera ny fampitandreman’ny Unesco ny tsy fifanarahan’ny asa atao amin’ny fanarenana tokony hatao mba hitazonana ny maha vakoka azy, araka ny taratasy nalefan’ny talen’ny ‘Centre du Patrimoine Mondial’ eo anivon’ny Unesco, Dr Mechtild Rössler tamin’ny masoivohontsika eo anivon’ny Unesco any Paris Ramatoa Yvette Sylla tamin’ny 24 fevrie 2020. Novoizina mafy tamin’ny haino aman-jerim-panjakana TVM sy RNM moa fa zavatra nifanarahana tamin’ny komity siantifika ny fanatanterahana azy io, na dia hafa noho izany aza ny vaovao miely any anivon’ny tambajotra sosialy sy ny gazety any ivelany toy ny ‘Le monde’ nanamarika ny fisian’ny tsy fitovian-kevitra amin’ny fanorenana azy araka ny resany tamin’ny Profesora Rafolo Andrianaivoarivony mpikambana amin’ny komity siantifika, ary nilaza ho nametra-pialana mihitsy ; nampanantsoin’ny filoham-pirenena ity mpahay tantara sy mahalala momba ny vakoka ity tamin’ny 25 mey, ary voalaza fa tsy nekena ny fametram-pialany ary mijanona ho mpikambana ao amin’ny komity siantifika izy, araka ny fampitam-baovao avy any amin’ny prezidansa. Tombanan’ny mpanara-baovao sasany ho toa tahaka ilay resaka CVO sy ny hevitry ny ANAMEM (Académie nationale de médecine de Madagascar) indray ity raharaha ity, manohitra dia avy eo manaiky.
Momba ny OMS sy ny CVO nahabe resaka sy tsy mampitovy hevitra ny olona rehetra ny fisotroana na fampisotroana azy (an-tery ho an’ny mpianatra tany am-boalohany), dia nambara koa tamin’iny herinandro iny ny fisian’ny fifampiresahana teo amin’ny filoha Rajoelina sy ny tale jeneralin’ny OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus tamin’ny alalan’ny ‘visioconférence’ ka hanampian’ny OMS an’i Madagasikara amin’ny fanaraha-maso ny ‘essai clinique’ momba ny CVO. Raha ny marina, tsy niova amin’ny andraikiny eo amin’ny fampanarahana ara-tsiansa ny fanafody ampiasaina vokatry ny fikarohana atao ny OMS, ary tsy i Madagasikara irery no hanaovany izany fa maneran-tany, hita ao amin’ny tranonkalan’ny OMS ny toromarika sy dingana samihafa atao momba izany. Na eo aza izany sy ny ahiahin’ny olona sasany momba ity CVO ity, dia manohy ny dokam-barotra momba azy ny fitondram-panjakana amin’ny TVM sy ny RNM mba hampitomboana ny hery fiarovana ao amin’ny tena, efa vita an-kira izany ary efa amidy amin’ny tsena tokoa ilay CVO ranony sy fangaro ho tanehana. Momba ny fikaroham-panafana amin’ity aretina covid-19 ity ihany dia nohazavain’ny Profesora Luc Rakotovao tamin’ny fandaharana isan’andro momba ny ‘covid-19’ tao amin’ny TVM sy ny haino aman-jery samihafa tamin’ny 27 mey fa samy hafa amin’ny CVO ilay tsindrona fangarona fanafody roa hanaovana ‘essai clinique’, fanafody niarahana tamin’ny siantifika avy any Maurice sy Thailande ary Etazonia. Tany Toamasina no efa nambaran’ny filoha Rajoelina ny momba izany tamin’ny 26 mey fony izy nanao fitsidihana tany an-toerana nanolotra fitaovana hiatrehana ny aretina ‘covid-19’.
Eo amin’ny ara-panahy, dia mitohy ny fotoam-bavaka tamin’ny haino aman-jery noho ny tsy mbola fisokafan’ny Fiangonana rehetra tamin’ny alahady 24 mey teo. Ho an’ny EKAR dia niainga hatrany tao amin’ny katedraly Andohalo ny lamesa nampitaina tamin’ny radio sy televiziona IBC, notarihin’i Mgr Pascal Andriantsoavina, eveka mpanampy ao amin’ny diosezin’Antananarivo. Nasongadiny tamin’ny fifampizarana nentiny tamin’ny toriteniny ny toe-po enti-mivavaka sy fanarahana ny sitrapon’Andriamanitra izay tsy mankasitraka ny fisaratsarahana, ary indrindra ny fanarahana an’i Kristy fa tsy fanarahana olona izay mety manana ny kilemany ka mahatonga anao tsy hivavaka. « Aza manaraka olona fa Kristy no arahina », hoy ny eveka. Nanentana tamin’ny hira tamin’izany ny chorale Antsan’ny Trinite Masina Manjakaray. Teny amin’ny FLM 67 ha kosa no nanaovan’ny FFKM fiaraha-mivavaka notarihin’ireo filoham-piangonana ao anivony, nalefa tamin’ny TVM sy RNM tamin’io alahady 24 mey io ihany. « Mandehana araka ny fanahy fa vokatry ny fanahy dia fitiavana » no nitondran’ny Pasitera Ammi Andriamahazosoa ny toriteniny izay nanasongadinany ny halehiben’ny fitiavana tsy misy tambiny ka itiavana na dia ny fahavalo aza. Nakany ohatra manokana ny tantaran’i Nelson Mandela izay namela ireo fotsy hoditra nanagadra azy kanefa nisaorany.
Maherin’ny 5,4 tapitrisa no tratry ny tsimokaretina ‘covid-19’ maneran-tany tamin’ny 26 mey raha maherin’ny 4,8 tapitrisa izany tamin’ny 18 mey, ary maherin’ny 340 000 ireo namoy ny ainy (maherin’ny 317 000 tamin’ny 18 mey). Ho an’i Madagasikara, araka ny tatitra nentin’ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra teny ofisialy momba ny ‘covid-19’ tamin’ny 27 mey dia 612 ireo tranga mitondra ny tsimokaretina hatramin’ny 19 marsa nanaovana fitiliana (322 tamin’ny 18 mey), miisa 9681 ny fitiliana natao hatramin’ny 25 mey nanomezana ny tarehimarika tamin’ny 27 mey. Marihina fa vokatry ny fitiliana natao ny omalin’ny amoahana ny tarehimarika no aroson’ny mpitondra teny ofisialy momba ny covid-19 (8 ora maraina hatramin’ny 6 ora hariva). Miisa 151 no sitrana hatramin’ny tamin’ny 27 mey (119 tamin’ny 17 mey) ary 459 no manaraka fitsaboana (203 tamin’ny 17 mey). Mijanona ho roa ny namoy ny ainy noho ny covid-19 raha ny nambara tamin’ny 26 mey. Marihana fa lasa telo ireo toerana hanaovana fitiliana PCR dia ny HJRA, ny Centre d’infectiologie Charles Merieux ary ny Institut Pasteur de Madagascar.